I-Porn idibaniswa nokunyuka kolwaphulo-mthetho ngokwesondo Umvuzo weZiseko
Ikhaya Umthetho Ukunyuka kolwaphulo-mthetho ngokwesondo
Inqanaba lesenzo solwaphulo-mthetho ngokwesondo kwindawo ephezulu eScotland apho abatshutshisi baxela ukuba ulwaphulo-mthetho lwezesondo li-80% yeso sizathu kwiNkundla ePhakamileyo yeNkundla.
Ijaji eliphezulu kakhulu eNgilani naseWales, INkosi oyiNtloko yezoBulungisa, iNkosi uTomas of Cwmgiedd, yathi iimeko zecala lolwaphulo-mthetho ziyakhula kwaye azikwazanga ukuchazwa nje ngokuba iziganeko zembali ziya kukhanya. "Ezinye zeefoto zoononografi azikholelwa kulokho abonisayo kwaye ngokungangabazeki zinempembelelo ebantwini." Nangona wayebhekiselele kwimpembelelo engalunganga yolu hlobo kwiijaji, kusebenza ngokufanayo kubantu abemi aba Ividiyo ibonisa ukubukela ixabiso elikhulu.
Le vidiyo ibonisa uDave Thompson, iGosa eliyiNtloko lamaPolisa aseWest Midlands, evela phambi kweKomiti yezeKhaya yePalamente nge-25 ka-Okthobha ka-2017. Uthetha ngendlela othuke ngayo zizinto zesondo amagosa akhe afumana amadoda e-UK afumana kuzo. iwebhu emnyama. (Ezizimeleyo, imizuzwana engama-28)
I-porn yezomthetho lishishini elikhulu kakhulu. Ukufumaneka okufumanekayo kokufumana ixabiso eliphantsi kunye nokufikelela ngokulula kwi-intanethi kunye nokungaziwa kwayo kuye kwenza ii-smartphones 'zanakho' kunye nezinto zokuzonwabisa ezilula.
Iibrits ezingaphezulu zibukela iifoto zabo kwii-smartphone ngaphezu kweekhomputer. I-62% yabantwana abaneminyaka eyi-12-15 banama-smartphones ngokwemibiko ye-2013 Ofcom.
Ingqondo ephazamisayo ingozi engapheliyo ye-intanethi ye-intanethi, ingakumbi kwi-brains ebuncinci yabantwana abaselula, ingabangela ukunyanzelisa nokuziphatha okungazenzisiyo okungakhokelela kwisenzo socansi.
Ngaphandle kokuhlaselwa ngokwesondo, umntu unokugwetywa ulwaphulaphulo olunzulu. Ngokomzekelo, omnye udumo olungumfana, siza kumthi nguBob, wafunyanwa enecala lokufumana iifoto zoonografi ngenxa yobuninzi beefoto ezingenanto ezazifumana kwifowuni yakhe. Ezi zizithombe zathunyelwe kuye nge-Facebook kunye nezinye izoluntu kwizentlalo ngabantwana abakubonayo abaselula. Nangona akazange ahlangane nala mabhinqa, ukuhlala yodwa kwakwanele ukuba athathwe.
Imiphumo yesigwebo sezocalulo zesondo njengoko kuboniswa ngabantwana be-pornography ngokuqinisekileyo kuya kuba ngokuqinisekileyo ukuba isaziso kwiRejista yabalaphuli bezesondo. Kuthetha ukuthini ukuzenza umntu onjengeBob?
Kuthetha ukuba uya kulahlwa yiprofayili yakhe ephakamileyo, umsebenzi ozuzayo. Akayi kukwazi ukufumana i-visa ukuthatha intombi yakhe kwi-Disneyland e-US okanye naphesheya kwelinye ilizwe. Ukuba kamva ukuba banabantwana babo, uya kuhlolwa ngokuqhubekayo ngabasebenzi bezenhlalakahle nangona emva kokuba igama lakhe livela kwiRejista yabalaphuli beSondo. Konke oku kwenzeka ngenxa yokungazi ngomthetho kwaye mhlawumbi ubuncwane bentsha ngenxa yemininzi yokubonga, i-WAGs encinane ye-WAGs enqwenela ukuba negalelo lokuphila ngokuziwayo.
Ukwenza abantu abancinci bazi ukubale mngcipheko namhlanje kubalulekile. Akukhona nje 'ingozi yomntu' kwaye ukwesaba ukulungiswa kwe-intanethi ukuba abantu abanonophelo kufuneka baqaphele, kodwa ukulimaza abantwana babo kubangela ukuba bangaboni ngokukhawuleza ukuxhaswa kwi-smartphone yabo, nokwenza oko 'bonke abantu' babonakala bekwenza . I-intanethi ye-intanethi ichaphazela ingqondo ngokungafaniyo kumabonwakude okanye kumabonakude kunye neeDVD.
Ukuthengwa okanye ukusabalalisa imifanekiso yezondo zabantwana akukho mthethweni. Ukuba ufumanisa ukuba ukhangele ezi zinto kwaye uxhalabele, qhagamshelana nothando Misa ngoku! Uncedo okanye Lucy Faithfull Foundation. Nokuba awuzimisele kudibana nomntwana ngenjongo yokunxibelelana ngokwesondo, ukuba nemifanekiso kuphela kungakhokelela kutyelelo lwamapolisa. Nxibelelana nale mibutho yesisa ukuba sele ucele amapolisa.
<< Ukuziphindezela kwi-Porn Umzi mveliso we-Porn >>